Kupindura kwaTwitch kuvashandisi vakatsamwa nezvekubviswa kwakawanda | Linux Vakapindwa muropa
Kutenderera vhidhiyo mutambo machisi yave kuita yemakwikwi imwe nzira kune yechinyakare kushandiswa kwemultimedia zvemukati. Kunyangwe iyo nhamba yemitambo inoyerera paLinux iri kukura muhuwandu. Ndosaka iyo indasitiri yekuparadzira zvemukati yakatangwa neiyi nzira nyowani yekuwana mvumo.
Twitch ivhidhiyo yekushambadzira chikuva akaberekwa kubva kumukwikwidzi weYouTube anonzi Justin TV uyo akabva anyangarika. Kunyangwe Simba rayo ndiko kutapurirana kwemitambo kana kudiwa, zvakare inotsigira mamwe marudzi ezvinyorwa. Inofungidzirwa seimwe yeanonyanya kukosha masosi eInternet traffic.
Kune izvi, hazvishamise kuti Vamiririri vemavara makuru ekurekodha vachatanga kukutumira zviuru zvezaziso zvekutyorwa kwekopiraiti. Kusvikira Chivabvu chegore rino, yaingogamuchira zvichemo makumi mashanu pagore zvine chekuita nekusabvumidzwa kwemimhanzi. Mazhinji ezvichemo ane chekuita nemavhidhiyo akaiswa kwenguva refu.
Iyo kambani yakasarudza kucheka kurasikirwa kwavo, ikabvisa izvo zvinokanganisa zvikamu, uye yakayambira varwi kuti vasaridze mimhanzi yakarekodwa panzizi dzavo kunze kwekunge vaine kodzero. kana kungoti mbeveve mutambo wemutambo. Izvo zvinofanirwa kujekeswa kuti zvese zvirevo zvainangidzirwa kumimhanzi yekutengesa yakaridzwa padivi pemutambo, kwete iwo mutambo wemimhanzi pachawo.
Izvi zvakagadzira kuratidzira kukuru kubva kuvashandisi pasocial network avo vakaisa mavhidhiyo asina odhiyo kana nemimhanzi yavo yakatambiswa zvakashata.
Iyo Dhijitari Millennium Copyright Mutemo ("DMCA") seti yezvipo zveUS zvinobvumidza zvemukati kugadzirwa uye kugovaniswa vachishandisa vanopa masevhisi edhijitari akadai seTwitch. Mukudzoka, avo vane mutoro wesaiti iyi vanofanirwa kupa nzira kune vane copyright kuti vanyunyute pamusoro pekushandisa kwavanofunga kuti hakuna kukodzera.
Kupindura kwaTwitch kuvashandisi vakatsamwa
Mune pambiru kubva kubhuku blog yakatsanangura:
Mafashama akangoerekana aitika ezaziso akatishamisa isu sevazhinji venyu. Isu takazoonawo kuti isu taida kupa vanodzikisira neakawanda mamateji uye zvemukati manejimendi maturusi kuvabatsira kubata nenhamba isina kumboitika yezviziviso zvinouya zvese kamwechete. Saka isu patakaenderera mberi nekubvisa zvirimo izvi zviziviso zvainge zvichinongedzera sezvaidikanwa neDMCA, isu takanzwisisa kuti maVOD nemavhidhiyo kubva makore apfuura anogona kunge asingaratidze maitiro ako azvino kumimhanzi. Naizvozvo, isu takamira zvakare kugadzirisa kubviswa kwakabatana neizvi zviziviso kuvapa maturusi, ruzivo uye nguva yavaizoda kutevedzera.
Muchinyorwa chimwe chete vanobvuma kukanganisa kwavo
Kumwe kwekukanganisa kwatakaita kwaive kusiri kuvaka maturusi akakodzera kubvumidza vagadziri kubata avo veVOD uye Clip maraibhurari. Ivo vanonyatsosvotwa kuti iyo yega sarudzo yatakapa yaive yakawanda clip yekudzima chishandiso, uye kuti isu takangovapa ziviso yemazuva matatu kuti vashandise chishandiso ichi. Isu tingadai takagadzira maturusi akaomesesa uye ari nyore kushandisa kare kare. Isu hatina kuita izvozvo, zviri kwatiri. Uye isu tingadai takapa vagadziri kwenguva yakareba yenguva yekugadzirisa yavo VOD uye Clip maraibhurari - icho chaive chikanganiso futi. Tine urombo zvechokwadi nemhosho idzi, uye tichaita zvirinani.
Matipi ekambani ndeaya:
Shandisa zvakasununguka mumhanzi. Panyaya yemitambo, tarisa kana iro rezenisi remushandisi richibvumira mimhanzi kuti ipfuudzwe.
Muchiitiko chemavhidhiyo ekare, dziongorore imwe neimwe uye bvisa izvo zvine copyright zvinyorwa.
Ipo ivo vakavimbisa kuvandudza maturusi ekupa vashandisi masimba makuru pamusoro peaudio iyo inoparadzirwa nekutepfenyurwa kwevhidhiyo.Kubva kukambani vakaramba kuita chibvumirano nemakambani ekurekodha akaita seayo YouTube.
Tiri kutaura tichishingairira nemazita makuru rekodhi pamusoro penzira dzinogona kuwedzera dzekupa marezinesi idzo dzinokodzera sevhisi yeTwitch. Izvo zvakataura, izvozvi marezinesi ekuti marekodhi anorekodha ane mamwe masevhisi (ayo anowanzo cheka mari yevagadziri kubva pakubhadhara zvinyorwa zvemarekodhi) hazvina musoro kuTwitch. Ruzhinji rwevagadziri vedu havasanganisi mimhanzi yakarekodwa sechikamu chekutepfenyura kwavo, uye mhedzisiro yemari kune vavaki vehurongwa hwakadai hwakakosha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Mhinduro yaTwitch kuvashandisi vakatsamwa nezvehukuru vhidhiyo kubviswa